Filtrer les éléments par date : dimanche, 18 août 2019
dimanche, 18 août 2019 17:51
Fandriam-pahalemana an-tanan-dehibe: Hisy ny fandraisana Polisy vaovao miisa 1250 amin’ity taona ity
Hisy ny fanorenana trano vaovao sy fanatsarana sy fampitaovana maro samihafa eny amin’ireo Sekolin’ny Polisim-pirenena misy, mba hahalavorary ny fiofanana izay ho arahin’ireo Polisy vaovao vao horaisina ireo.
Mitohy hatrany ihany koa ireo hetsika fisafoana na « patrouille » ataon’ny mpitandro filaminana telo tonta : Polisy, Zandary ary Miaramila eo amin’ireo faritra ilana izany eny an-tanan-dehibe.
dimanche, 18 août 2019 17:42
Filaminana eny amin’ireo lalam-pirenena: Hisy «Brigade Routière Spéciale» manomboka amin’ity taona ity
Hapetraka manomboka amin’ity taona 2019 ity ny «Brigade Routière Spéciale» eny anivon’ny faritra fialan-tsasatra voaaro na ny «Aire de repos sécurisée» ho fanamafisana ny fitandroana ny filaminana sy fandriampahalemana eny amin’ireo lalam-pirenena.
Kaominina miisa valo (8) no hisantatra izany, dia ao amin’ny Kaominina Ambalamanakana, Distrika Ambohimahasoa (RN7), Kaominina Sahamamy, Distrika Brickaville (RN2), Kaominina Ambohimpihaonana, Distrika Ambohidratrimo (RN4), Croisement Kiangara, Distrika Ankazobe (RN4), Kaominina Tsaramandroso, Distrika Ambatoboeny (RN4), Kaominina Manampisoa, Distrika Ambalavao (RN7), Kaominina Ivohita, Distrika Sakaraha (RN7) ary ao amin’ny Kaominina Irondro, Distrika Ifanadiana (RN25).
dimanche, 18 août 2019 17:31
Fitsinjaram-pahefana: Hisy tetibola mitentina Iray miliara Ariary isaky ny Faritra
Manomboka amin’ity taona 2019 ity, dia hisy Tetibola mitentina Iray miliara Ariary isaky ny Faritra homen’ny Fanjakana hampiasaina amin’ny fampandrosoana eny ifotony, araka ny fandaharan’asan’ny Faritra tsirairay avy. Hatomboka amin’ity taona ity ihany koa ny fampitaovana ny Faritra rehetra manerana ny Nosy, hoy ny Praiminisitra nanoloana ny Solombavambahoaka nandritra ny fanoloarana ny fandaharanasa fanatanterahana ny Politika ankapoben’ny Fanjakana.
Hapetraka ato anatin’ny telo volana ho avy izao ireo fitsipika aman-dalàna vaovao hifotoran’ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara, izay hirakitra ireo fepetra mamaritra ny andraikitra, ny anjara toerana ary ny fahefan’ny vondromparitra itsinjaram-pahefana.
Hivoaka alohan’ny faran’ny volana Oktobra 2019 ho avy izao ny rijan-teny hametrahana ny vidin’ny FIB (Fiche Individuelle des Bovidés) sy ny Bokin’ny omby, ho sarany iray mitovy manerana an’i Madagasikara.
Izany no hatao, hoy ny Praiminisitra Ntsay Christian, dia mba hiadiana amin’ny kolikoly amin’ny fomba maharitra izay mianjady indrindra indrindra amin’ireo tantsaha sy mpiompy any ambanivohitra rehetra any.
dimanche, 18 août 2019 17:24
Tsihombe: Hisitraka herinaratra avy amin’ny jatropha
Vita ny fanamboarana ny toby famokarana herinaratra avy amin’ny biomasse (jatropha) ho an’ny tananan’i Tsihombe.
dimanche, 18 août 2019 17:19
Famatsiana solika: Distrika miisa 40 eto Madagasikara no tsy ahitana « station-service »
Mbola misy Distrika 40 eto Madagasikara no tsy manana toby mpaninjara solika (station-service). Distrika 5 amin’ireo tsy mbola manana ireo no hahazo toby mpaninjara solika amin’ ity taona 2019 ity, ka efa vita ny telo amin’ireo dia ny ao Anjozorobe, Andilamena ary Mahabo. Efa eo andalam-panorenana kosa ny roa dia ny ao Ifanadiana sy Belo-sur Tsiribihina.
Nanamafy ny Praiminisitra fa tsy maintsy misy toby fivarotana solika iray farafahakely ny Distrika rehetra eto Madagasikara alohan’ny taona 2023.
dimanche, 18 août 2019 17:14
Fampianarana ambaratonga ambony: Hatsangana ny Oniversite miisa enina ny taona 2020
Hananganana Oniversite any Ambovombe, Mandritsara, Antalaha, Ambatondrazaka, Farafangana ary Ihosy, manomboka amin’ny taona 2020.
Hatomboka amin’ny volana septambra 2019 ny fananganana ny fotodrafitr’asa ho an’ireo Oniversite efatra, dia ny ao Antsirabe, Fenoarivo Atsinanana, Soavinandriana ary Morondava.
dimanche, 18 août 2019 17:07
Fanabeazana: Hanangana EPP telopolo, CEG valo, lisea enina amin'ity 2019 ity
EPP vaovao miisa telopolo no hatsangana amin’ity taona 2019 ity dia ny ao Andemaka-Vohipeno, Ifanadiana, Farafangana, Manja, Mitsinjo-Toliara, Matsaborilaidama-Ambilobe, Soavina-Betafo, Brickaville, Sahalava-Fianarantsoa, Ambatolahy-Fianarantsoa, Ankadinandriana-Antananarivo Avaradrano, Antanetibe-Ambohimangakely, Iavoloha-Atsimondrano, Antanimena-Tana Ville, Ambohipo Tana-Ville, Ankorondrano-Tana Ville, Ambodirano-Tana Ville, Analamahitsy-Tana Ville, Andranomena-Tana Ville, Alakamisy-Ambositra, Morombe, Ampitsaharana-Soavinandriana, Befalafa-Tolagnaro, Andranomadio-Tsiroanomandidy, Beandrarezona-Bealanana, Sahavolo-Fenoarivo Atsinanana, Asabotsy-Ambatondrazaka, Amborovy- Mahajanga, Andrefatsena-Ihosy ary Antanimbarinandriana-Vohémar.
Nandritra ny lanonana famoahana ireo Zandary Mpiana-draharaha miisa 1195 avy ao amin'ny andiany faha-74 tao amin’ny Sekolin’ny Zandarimariam-pirenena Ambositra, ny famindram-pibaikoana teo amin'ny Vondron-tobim-pileovana Amoron'i Mania sy fankasitrahana ireo Zandary maherifo, no nanambaran'ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria, Jeneray Ravalomanana Richard, tamin’ny antso finday, fa mari-pahaizana bakalorea no takiana amin'ireo zatovo hifaninana amin'ny andiany faha-75 izay hatao tsy ho ela.
Hisy fandraisana Zandary vaovao miisa roanjato sy arivo (1200) ny amin’ity taona 2019 ity.
Tonga nitaraina tao amin'ny Commissariat Mangarano – Toamasina ny fianakaviana iray ny 13 aogositra 2019, nilaza ny fahaverezan'ny vola 7 tapitrisa Ariary.
Nanao fikarohana avy hatrany ny Polisy, nisy ihany koa ny loharanom-baovao avy amin’ny tsara sitrapo nahatsapana ny fihetsik'ireto mpanampy roa vavy miasa ao amin’ilay fianakaviana nitaraina ho very vola.
Niaiky izy roa vavy fa nangalarin'izy ireo ny vola, ary nitantara ny fomba nakany ny vola. Napetrak'izy ireo tany amin'ny sipany ny vola, ary mbola nisy tratra tao ny ankamaroan'ireo vola ireo. Ny sasany tamin'ireo vola dia efa nividianana finday ho an'ireo akaiky azy.
Natolotra ny Fampanoavana izy ireo, ary voatana am-ponja vonjimaika.